बनाउलान त संबिधान ? के छ अन्तरिम सबिधानमा - We All Nepali
संबिधान सभाको थपिएको समय पनि अब केही दिन मात्र बाँकी छ । तर राजनैतीक दलका नेता हरु भने अझै पनि कुर्सी कै कुरा गरेर भेडा जुदाइ गरिरहेका नै छन्। संबिधान को धार १४८ लाई २ पटक सम्सोधन गरेर २ बर्ष ६ महिना बाट ३ बर्ष ३ महिना बनाउदा पनि उनिहरुलाई कुनै आपत्ति छैन। मजाले कोहि सम्सद अबरुद्ध गर्ने कार्यमा ब्यस्त भने कोहि प्रधान मन्त्री को रजिनामा माग गर्ने काममा नै ब्यस्त देखिन्छन्। एक महिना भन्दा कम समय बाँकी हुँदा पनि दलहरु को घैटोमा घाम लागेन। सेना समयोजन र शान्ति स्थापना को कुरा त पराइ जाओस, अहिले पनि सरकार परिवर्तन र सत्ताको खेलले तीनलाई छोडेन। अबको बाँकी दिनमा पनि संबिधान बन्छ भनर सोच्नुको कुनै औचित्य नै छैन। फेरि पनि समय बढाउछन । अनी फेरि एक अर्कालाई दोश दिन्छन्। के कुराले खास अड्कियो ती राजनैतीक दलका आफना स्वार्थ बाहेकले ? किन मिल्न सकेनन यिनीहरु? जनताले गरेका आन्दोलन के लागि थिए, सबै प्रश्नहरु हामी सबै को हो, सबै सँग आज। यी प्रश्न हरु हामीले राख्ने बेला आएको छ। ती सबैलाई हामीले चुनेको हो, हाम्रो नुन खाएका छन् तीनले, हामीलाई जवाफ दिनु तीनको नुनको हक हो। जनताको पैसाले भात खन्छन्, जनताको सेवा तीनको कर्तब्य हो।
हुनत राजनैतीक दलका दिग्गजहरुलाई संबिधान २-४ बर्षमा बनाउन सक्छौ भन्ने लागेको थिएन भन्ने कुरा हाम्रो संबिधान को धारा १४८ मा कुनै प्रतिबन्धत्मक शब्द बिनानै संबिधान जहिले पनि सम्सोधन गर्न सकिने गरि ब्यबस्था गरेको भेटिन्छ। हुनत यो कुराहरु अदालतले परिभसित गर्ने कुरा हुन तर केही नेपाली हामीले पनि बुझने र सुचना र कानुन को हकको उपभोग गर्न के रैछ त यो संबिधानमा जुन त्रैमसिक रुपमा हाम्रा राष्ट्रिय नेता हरुले सम्सोधन गर्ने भनेर मात्र हामीले संबिधानको बारेमा बुझ्ने कोशिस गरेका हौ । तर हामीले पनि जन्नु पार्ने कुरा हो यो।
हाम्रो अन्तरिम संबिधान को धारा १४८ मा संबिधान को कुनै पनि धारा सम्सोधन वा खारेज दुई तिहाईको मत ले गर्न सकिने ब्यवस्था रहेछ। त्यहि धारा को प्रयोग गरि बारम्बार संबिधान सभाको को समय थप् गर्दै आएका छन् सदस्य हरु।
तर उक्त १४८ धारा को स्वत्न्त्र प्राबधनलाई धारा ६४ को दोश्रो हरफ अनुसार "तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संबिधान निर्माण गर्ने काम पुरा हुन नसकेकोमा संबिधान सभाले प्रस्तव परित गरि संबिधान सभाको कार्यकाल थप ६ महिना सम्म बढाउन सकिने छ।" संबिधान सभा को समय बढाउने धारलाई परिवर्तन गर्न धर ६४ को दोश्रो हरफ ले प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ। तर २ पटक सम्म पहिलो हरफ मात्र सम्सोधन गरेर संबिधान को मर्मलाई बेवास्था गरेको जस्तो देखिन्छ। संबिधान सभाको समय संकटकाल घोषणा भएको कारणले संबिधान बन्न नसकेको स्थितिमा मात्र ६ महिना लाई समय बढाउन सकिने ब्यवस्था छ।
अन्तरिम संबिधानमा यस्तो ब्यवस्था हुँदा हुँदै सबै नेता हरु आँखामा पट्टि बानेर आफू आफूमा कुस्ती खेलिरहेका छन्। संबिधान सबको चुनाव नेताहरुलाई भत्ता खुवाउने भतेर भयेको छ। न देशको न जनताको वास्त छ न सम्बिधानको, उनिहरु के का लागि त्यहाँ छन् उनिहरुलाई नै थाहा छैन् जस्तो छ। हामी सबै सचेत हुनु आजको जरुरत हो। नेता धेरै हुन खोजे तर साचो नेता कोहि हुन सकेनन्। बेला बेलामा जनतालाई आशा देखाए, सबै देशका लागि लागे मुक्ति दिलाये, अनी फेरि एक समुह ले मोज गर्‍यो। २४७ बर्ष राजाले शासन गरे, अब केही निस्चित बर्गले।
यदि यसरी संबिधान सभाको नै समय थप्ने हो भने किन ६ महिनालाई थप्ने? संबिधानको धारा ६४ म संबिधान सभाको समय संबिधान नबने सम्मका लागि हुनेछ भन्ने सम्सोधन किन नगर्ने?